यी हुन् सलमानका अधुरा फिल्म
सलमान खान बिहीबार ५२औँ जन्मदिन मनाउँदै छन् । उनलाई बलिउडका दबंग खान पनि भनिन्छ । फिल्म हिट गर्न उनको नाम नै काफी हुन्छ । यही कारण उमेर ढल्किँदै गए पनि निर्देशकहरू उनको पछि लाग्ने गरेका छन् । तर, सलमानका केही फिल्म यस्ता छन्, जो आजसम्म पनि रिलिज हुन स ...
मलाईकाको घरमा अर्जुन
एजेन्सी - बलिउड अभिनेता अर्जुन कपुर र मलाईका अरोरा अफेयरका कारण चर्चामा छन् । उनीहरू खुलेरै डेटमा रमाइरहेका छन् । मिडियामा समेत उनीहरूले खुलेरै आफ्ना धारणा राखेका छन् ।हालै अर्जुन कपुर प्रेमीका भेट्न मध्यरातमा उनको घर पुगेको खवरले मिडिया तातेको छ । स ...
जाहन्वीलाई फेरि करणकै फिल्म
काठमाडौं - धडक फिल्मबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी श्रीदेवीकी छोरी जाहान्वी कपुर धर्मा प्रोडक्सनको नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित भएकी छिन् । धडकपछि हाल धर्मा प्रोडक्सनकै तख्तमा अभिनय गरिरहेकी उनको यो तेस्रो फिल्म हो । भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेअनुसार सो फिल् ...
यसकारण चैत १ मा नआउने भो ‘लभ स्टेसन’
काठमाडौं - प्रदीप खड्का अभिनित सिनेमा ‘लभ स्टेसन’को प्रर्दशन मिति पुनः पछाडि सरेको छ। सिनेमा रिलिजको घोषणा भएको १ दिन नबित्दै प्रदर्शन मितिमा हेरफेर भएको हो। गते बुधबार बिहान सिनेमाको प्रदर्शन मिति निर्माता गोविन्द शाहीले चैत १ गतेलाई कन्फर्म गरेका थ ...
वर्षमा कति बिदा लिन्छन् अक्षय ? यस्तो छ रहस्य
काठमाडौं - बलिउड अभिनेता अक्षयकुमारले वर्षमा चारवटा भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गर्ने गरेका छन् । यति गर्दा पनि उनलाई अभिनयप्रतिको भोक मेटिएको छैन रे ? हालैको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले आफूलाई वर्षमा अझ धेरै फिल्म गर्ने चाहना भएको बताएका छन् । ‘म वर्षमा धे ...
श्रीदेवीकी फ्यान सारा
काठमाडौं - अहिले नयाँ हिरोइन सारा अलि खानको चर्चा छ । केदारनाथबाट डेब्यु गरेकी सारा हिरो बाबु सैफअली खान र हिरोइन आमा अमृता सिंहकी छोरी हुन् ।केदारनाथ फिल्ममा उनले गरेको अभिनयले तारिफ मात्र पाएको छैन, उनलाई बलिउडकै उदाउँदो स्टारका रूपमा हेरिएको ...